Somaliland oo dadkeeda ka mamnuucday ka qeyb galka Siyaasadda Soomaaliya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Somaliland oo dadkeeda ka mamnuucday ka qeyb galka Siyaasadda Soomaaliya
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xeer Madaxweyne ka soo saaray Mamnuucidda ka qeyb-Qaadashada arrimaha Siyaasada dalka Soomaaliya, waxaana xeerkaas uu u dhigan yahay.
Markuu Arkay Madaxweynaha Somaliland Go’aanka labada Gole ee (Guurtida iyo Wakiillada) kuna taariikhaysan 11/10/2003, ujeeddadiisuna tahay mamnuucidda ka-qayb-qaadashada siyaasadda Soomaaliya;
Markuu Arkay: Degreeto Madaxweyne ee ku taariikhaysan 29/10/2003 ee lagu baahinayey go’aanka ay wada-jirka ku soo saareen labada Gole ee Baarlamaanka (Guurtida iyo Wakiillada).
Go’aankaan Maanta kasoo baxay Somaliland oo aaminsan inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ayaa kusoo aadaya xilli Soomaaliya ay ka aocdaan howlo doorashooyin ah, isla markaana ay qeyb ka yihiin Siyaasiyiin kasoo jeeda Somaliland.
Somaliland oo dadkeeda ka mamnuucday ka qeyb galka Siyaasadda Soomaaliya was last modified: December 8th, 2021 by warsan radio
Ururka Iskaashiga Islaamka Oo Cambaareeyay Qaraxyo Lagu Laayay Dad Shacab Ah